Wararka naga soo gaadhaya Magalaada Tog Wajaale ee Gobolka Faafan ayaa sheegaya in maanta duhurkii uu magaaladaas ka dhacey banaanbax balaadhan oo lagaga soo horjeedo xukumada Itoobiya iyo gacanyarayaasheeda.
Sida dadka magalada ku sugan noo xaqiijiyeen banaanbaxan ayaa waxaaa ku dhintey 3 qof oo 2 Gabdho yihiin midna Wiil dhalinyaro ah, kadib markii Ciidamada Itoobiya iyo kooxda Liyu Police ay rasaas ku fureen shacabkii dibad baxayey. Sidoo kaloe dhaawaca ayaa lagu sheegay in tiradoodu kor u dhaafsantahay 10 qof oo qaar ka mid ah uu soo gaarey dhaawac halis ah.
Dadka dhintey ayaa magacyadoodu naloogu kala sheegay:
Khadar Maxamed Ciise
Idil (oonaan magaceeda oo sedaxan helin)
Banaanbaxa ka dhanka ah xukumada Itoobiya ayaa ku sii fiidaya Gobolada Ogadeniya, iyadoo tobadaadyadii la soo dhaafey uu magalaada Diri Dhaba iyo dhamaan Gobolka Shiniile aad ugu baahey.
Dhinaca kale, askarta Itoobiya iyo gacanyaryaashooda ayaa waxay dadka guryaha uga soo saarayaan si qasab ah iyaga oo ku amraya in ay dhigaan banaanbax lagu taageerayo dawlada Itoobiya. Bananabaxan oo ujeedadiisu tahay in caalamka lagu tuso in shacabka Ogadeniya taageersanyahay dawlada Itoobiya. Ilaa hada falkan uma hirgelin wuxuuna keenay in dad badan oo shaab ah xabisyada loo taxaabo, qaar kalena si toos ah loo toogto.
PreviousEthiopian Forces kill young Somali woman in Ogaden after unrest
NextEthiopian forces kill three Somalis in Togwajale protests
Banaanbax ka dhacey Magaalada Diri Dhaba
Banaanbax ka dhacey Jaamcadaha Itoobiya
Tog Wajaale oo 15 qof xalay guryahooda lagala baxay